१२ हजार शिक्षकको दरबन्दी मिलान शुरु — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पत्रपत्रिका > १२ हजार शिक्षकको दरबन्दी मिलान शुरु
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अबको दुई महिनाभित्र देशैभर शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्याविधिमा–२०७६ पास भएसँगै मन्त्रालय शिक्षक पुनर्वितरण शुरु गरिएको हो।
कार्याविधिमा दरबन्दी पुनर्वितरण गर्दा साविकमा रहेका प्राथमिक विद्यालय, निमावि, मावि र उच्च माध्यमिक तहलाई आधार मानेर पुनर्वितरण गर्ने जनाइएको छ। सो कार्य्विधि गएको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो।
नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले १२ हजार शिक्षकको दरबन्दी मिलान शुरु शिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार कार्याविधिमा तयार भएसँगै स्थानीय तह, पालिका, प्रदेश र जिल्लामा बढी भएका शिक्षकको पुनर्वितरण हुनेछ ।
शैक्षिकसत्र २०७७ सँगै सबै तहमा पुनर्वितरण हुने गरी काम शुरु गरिएको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कार्य्विधि आएसँगै १२ हजार ८ सय २७ शिक्षकको दरबन्दी पुनर्वितरण हुनेछ ।
बढी भएका पालिकाबाट कम भएका पालिकामा, कम भएका जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा र बढी भएका प्रदेशबाट कम भएका प्रदेशमा दरबन्दी मिलान गर्ने प्रक्रिया सम्भवतः भोलि बुधबारबाट शुरु हुने जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले तयार गरेको कार्य्विधि केन्द्रमा पुगेको छ। दरबन्दी वितरण गर्दा सरकारले उपलब्ध गराएको प्रावि, (महिला शिक्षा परियोजना समेत), निमावि, मावि र उच्च माविको दरबन्दी, राहत अनुदान कोटालाई समेत गणना गर्ने, शिक्षक आवश्यकताको पहिचान गर्दा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण प्रयोजनका लागि जिल्ला शिक्षा समितिले विद्यालयमा बाँडफाँड गरेको दरबन्दीलाई आधार मानेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले उपलब्ध गराएको देशैभरको प्राथमिक तहको बचत हुन आउने दरबन्दी, निमावि र मावि तहमा मिलान गर्ने उल्लेख छ।
प्रावि तहमा काम गरेका शिक्षकलाई योग्यता र वरिष्ठताको आधारमा निमावि तहमा पठनपाठन गर्ने व्यवस्था कार्य्विधिमा उल्लेख गरिएको केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
त्यसरी दरबन्दी मिलान गर्दा अधिकांश विद्यालयमा समस्या समाधान हुने उहाँको भनाइ छ । तथ्यांकअनुसार प्रदेश १ को तेह्रथुममा ३९, वागमती प्रदेशको ललितपुरमा १ सय ४४, भक्तपुरमा १ सय ६० र काठमाडांैमा ८ सय २७ गरी १ हजार १ सय ३१ दरबन्दी बढी छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ६७, कर्णालको डोल्पामा र जाजरकोटमा १२–१२ शिक्षक दरबन्दी बढी छ ।
मन्त्रालयले शिक्षक बढी भएका १५ जिल्लाका शिक्षकलाई अन्य जिल्लामा मिलान गर्ने तयारी गरिरहेको छ। १५ जिल्लाका १ हजार ४ सय ९३ शिक्षकलाई एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा मिलान गर्ने भएको छ ।
उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा गएका शिक्षकको थप तलबको विषयमा मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो।
कार्याविधिमा कुनै विद्यालयमा माथिल्लो तहको दरबन्दी अपुग भएको खण्डमा तल्लो तहमा बढी दरबन्दी भएको भए तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले हिमालमा ४०, पहाडमा ४५ र तराईका लागि ५० विद्यार्थी अनुपातको आधारमा दरबन्दी पुनर्वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेशभित्रको अर्को जिल्लामा दरबन्दी मिलान गर्दा जिल्ला शिक्षा इकाइको समन्वयमा प्रदेश मन्त्रालयले गर्ने कार्य्विधिमा उल्लेख छ ।
कार्याविधिमासंघ, प्रदेश, स्थानीय तह र इकाइको भूमिका प्रस्ट उल्लेख गरेको छ। कार्याविधिमा समय तोकेरै दरबन्दी पुनर्वितरण गर्ने उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार इकाइले २०७६ फागुन मसान्तभित्र मिलान गर्न निर्देशन दिएको छ।
कार्याविधिमा शिक्षक स्थानान्तरण भएको विद्यालयमा अनिवार्यरुपमा जानैपर्ने, विद्यालयले अनिवार्य रुपमा हाजिर गराउनैपर्ने र हाजिर नगराए प्रअलाई जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ ।
२०७६ माघ १४ गते ०५:०६ मा प्रकाशित
पाथीभराको ३१७ रोपनी सित्तैमा यतीलाई
के एन्फाले देला त थ्रीस्टारलाई ६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति !
सर्वसाधारणलाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको साँढे २ अर्ब बढिको सेयर निष्काशनको कुरा के होला ?
२० लाख इकाई ऋणपत्र जारी गर्दै नबिल बैंक